Distribution ukufunyanwa okuzenzekelayo Network Intelligent Terminal Products
Zangaphandle lwepolitiki yombane, umthwalo switch, reclosing
Wasendlini full ezincamathelayo wesiphaluka & sivula
Khalisa unit main & isixhobo isenza i
ombane aphakathi kunye aphezulu utshintsho sekhabhinethi iseti
umkhuseli ombane aphakathi kunye aphezulu nemibane arrester
steel stainless nisishiye tie
ufumane lijongene zakutshanje kunye nezaphulelo.
TXGN6-12 sawa shintsha cabinet
Supply Amandla: TENPRO
izinto zokwambathisa kuqiniswe
indawo ephakeme customizable
Sawa utshintsho ikhabhinethi
Le cabinet iswitshi imo unit yemodyuli, leyo zinokudityaniswa ngendlela ngeendlela ezahlukeneyo, kwaye ubunjwe iiyunithi ezizinzileyo kunye neeyunithi andisiweyo ukuhlangabezana nemfuno ukusetyenziswa bhetyebhetye compact utshintsho kwikhabhinethi sezitishana ezahlukeneyo.
TXGN6-12 sawa utshintsho kwiKhabhinethi yinkqubo etywiniweyo ngokupheleleyo. Zonke amabakala alo bahlala kunye nokucima afakwe kwi iqokobhe steel stainless, isixhobo lonke iswitshi ayichaphazeleki kwiimeko bume zangaphandle, ngoko ke ukuqinisekisa ukuthembeka ukusebenza kunye nokhuseleko lobuqu, makaqonde ifitsha yesondlo-free. Ngokukhetha busbar andisiweyo, nayiphi indibanisela onokufikelela modularization ngokupheleleyo. Ukwambathisa ukhuseleko busbar elide kunye uvikele ukuqinisekisa ukuthembeka kunye nokhuseleko eliphezulu. TXGN6-12 uhlobo switch sawa cabinet unako kwakhona ukunika isisombululo TV esizisebenzelayo, zenza ingqiqo nokucima ezikrelekrele, kwaye ukunciphisa umthwalo yofakelo entsimini USB.
TXGN6-12 uhlobo switch sawa kuzobe non-andisiweyo standard loqwalaselo kunye andisiweyo yoqwalaselo standard. Ngenxa indibanisela umnqongo epheleleyo kunye nesiqingatha imodyuli expansibility yayo, iye bhetyebhetye okhethekileyo kakhulu.
TXGN6-12 uhlobo switch sawa iyasebenza GB standard.
Ubomi yoyilo phantsi kweemeko yangaphakathi (20 ℃) ​​ungaphezulu kweminyaka engama-30.
imodeli Product kunye nentsingiselo
uhlobo sawa utshintsho cabinet
TXGN6-12 series ikhabhinethi sawa gas SF6 njengoko arc zokucima kunye usambathisa medium.
Tshintsha IKhabhinethi etywiniweyo ngokupheleleyo, zigqunyiwe ngokupheleleyo; busbar, tshintsha yaye ubomi malungu ngokukhuselekileyo list shell steel stainless
Egumbini igcwele igesi SF6 of 1.4bar, kwaye ibanga wokhuseleko kukuba ukuya ku IP67 :. Isixhobo lonke utshintsho ukhululekile ngokupheleleyo kwimpembelelo iimeko zangaphandle kokusingqongileyo. Nangona phantsi kweemeko ezinzima ezifana emanzini transience, iswitshi kungenziwa eziqhutshwa ngokuqhelekileyo kwaye imveliso kunokuba ulondolozo-simahla ubomi.
IKhabinethi switsha na isixhobo ogqibeleleyo "ezintlanu kuthintelo" ezinxityelelanisiweyo, nto leyo ecaleni ngokupheleleyo abasebenzi kunye nezixhobo ukungasebenzi okubangelwa impazamo babantu.
Zonke nekhabhathi utshintsho ube nendlela uncedo uxinzelelo oluthembekileyo ekhuselekileyo, nokuba kwiimeko kakhulu ukuqinisekisa ukuba ukhuseleko lobuqu lwabasebenzisi.
Tshintsha ikhabhinethi wohlulwe unit esisigxina indibanisela kunye neyunithi zidityaniswe andisiweyo.
Tshintsha nekhabhathi akholisa egudle ephuma emgceni, kwaye kufakelwe kwiindawo ezahlukeneyo ukuphumeza ephuma ecaleni okanye ukwandiswa icala
Ubungakanani yikhabhinethi lula ukufaka kwaye nefanelekileyo ukuze isithuba encinane kunye neemeko amahlwempu zokusingqongileyo.
Tshintsha ikhabhinethi ingaqwalaselwa zombane, izixhobo zolawulo kunye ubhaqo kude ngokweemfuno ezahlukeneyo zabasebenzisi.
C umthwalo module sivula
Imodyuli F zihlangene izixhobo zombane
Kude / isisekelo sivula
lwepolitiki (circuit) full
Power frequency ukumelana ombane (efanayo / kwaphulwa)
Lightning frequency ukumelana ombane
Ikaliwe evaliweyo-loop breaking yangoku
Ilinganiswe abize cable nokuphula current
Rated ukwenziwa short-zeesekethe current (iphezulu)
peak Ikaliwe ukumelana yangoku
Ikaliwe elifutshane bexesha ukumelana ngoku
Ikaliwe short-circuit breaking yangoku
transfer current Ikaliwe
ngoku esiphezulu iifyuzi
Previous: TXGN66-12 (Z) ezizinzileyo apha isixhobo ziguquka ombane aphezulu isixhobo ziguquka
Okulandelayo: TXGNH-12 Box-uhlobo esisigxina isixhobo metal-zifakwe utshintshe nje ombane aphezulu isixhobo ziguquka
Unit Hexafluoride Ingozi Ring Main
Unit Voltage Ring Main High
Mbumbulu Unit Abb-Uhlobo Ring Main
Mbumbulu Unit Schneider-Uhlobo Ring Main
Wasendlini Ring Main Unit kude Switch
TFN5-12DR series esendlwini ombane aphezulu umthwalo switc ...
TKYN28-12 vehicles AC kumphati metal-zifakwe s ...
TD series lonikezelo Intelligent esizisebenzelayo s ...
TT transformer Intelligent terminal unit
TF series Imida Intelligent utshintsho contro ...
TGN19-12 (C) series esendlwini isolatio ombane aphezulu ...